Move to Heaven – Gold Channel Movies
Move to Heaven ( 무브 투 헤븐: 나는 유품정리사입니다)
Geu-Roo (Tang Joon Sang) ဟာ Asperger syndrome ကိုခံစားနေရတဲ့ လူငယ်လေးပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အပေါင်းအသင်းမလုပ်တတ်တာ၊ စိတ်အားငယ်တာ၊တစ်ခုခုကို ထပ်တလဲလဲလုပ်တာ စတဲ့လက္ခဏာတွေကို ခံစားရတတ်တဲ့သူပါ။ ဖခင်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ “Move To Heaven” ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလေးကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အလုပ်က သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းဆည်းပြီး စီစဉ်ပေးရတာပါ။
တစ်နေ့မှာတော့ Geu-Roo ရဲ့အဖေဖြစ်သူဆုံးသွားပြီး တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့တဲ့ Geu-Roo ရှေ့မှာ ဦးလေးဖြစ်သူ Sang-Koo (Lee Je-Hoon) ပေါ်လာပါတော့တယ်။ San-Koo က တိုက်ခိုက်ရေးသမားဖြစ်ပြီး ထောင်ကျတဲ့အထိ ပြဿနာရှာခဲ့သူပါ။ ထောင်ကနေ ထွက်လာပြီးနောက် Geu-Roo ရဲ့ အုပ်ထိန်းသူအဖြစ် “Move To Heaven” ကို နှစ်ယောက်သား ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရပါတော့တယ်။
စရိုက်မတူတဲ့ တူဝရီးနှစ်ယောက် ဘဝကြီးကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲ။ သေဆုံးသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူ သေဆုံးသူတိုင်းရဲ့ ဘဝဇာတ်လမ်းတွေကို ဘယ်လိုနားထောင်ပေးကြမလဲ။ သံယောဇဉ်၊ မေတ္တာနဲ့ မိသားစုဘဝတွေ၊ လူ့ဘဝတွေကို လှလှပပရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ GC Drama ပရိတ်သက်ကြီးအတွက် လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ ကားကောင်းလေးဖြစ်တာမို့ ဆက်ဆက်ကြည့်ရှူအားပေးကြပါဦး။
Translated by Athena,Faith,Hnin Aye Nyein,Youn Kyi Phyu ,Winnie Ngoon and Phyo Thant
ArethaSeptember 6, 2021Reply
Also visit my homepage :: asmr our
LovieSeptember 4, 2021Reply
blogs? I haveablog based upon on the same information you discuss and asmr;
http://bit.ly/3yNXjWx, would really like to have you
EwanSeptember 2, 2021Reply
as i want enjoyment, for the reason that this this asmr web site conations genuinely pleasant funny data too.
ReyesSeptember 2, 2021Reply
Check out my blog … scoliosis surgery in
BevSeptember 1, 2021Reply
Takealook at my site asmr what (bitly.com)
NganAugust 31, 2021Reply
My homepage – off quest bars (http://t.co/)
PalmaAugust 30, 2021Reply
What web host quest bars are; t.co,
MarissaAugust 28, 2021Reply
It’s reallyanice and helpful piece of web hosting info.
KhantThuReinMay 15, 2021Reply
Just 2Episodes remain.Hurry up!!!